ဆေးရုံတွေ ဘယ်လောက် ထပ်ဆောက်နေပါ‌စေ ဒီနှစ်ချက် ကို မလိုက် နာရင် ကိုဗစ်ကို လုံးဝ အနိုင်မရနိုင် – Shwe Sar
ဆေးရုံတွေ ဘယ်လောက် ပဲ ထပ်ဆောက်ဆောက် အခြေခံအကျဆုံး mask တပ်တာနဲ့ social distancing ကို လူများများထည့်ပီး မတင်းကျပ် မကြပ်မတ်ရင် ဆရာဝန်တွေ volu nt eer တွေပါ လက်ပန်းကျ စိတ်ကုန်လာတော့မယ်။
ခုထိေ မးစေ့တွေ ချိတ်ကောင်းတုန်း.. Shopping mall တွေမှာ အရင်လို အီလေး ဆွဲ ဈေးဝယ်နေတုန်း..(မနေ့ကဆို ဩချမိတယ်) ၂၀၀ ဒဏ်ရိုက်လို့ ၅၀၀၀ တန် ပေးရင် ဖမ်း တဲ့ သူ ၄၈၀၀ ပြန်အမ်းဖို့ ခက်သွားပြီ….၁၀၀၀ တန် ၅ ယောက်လောက် ဆက်တိုက် ပေးသွားရင်ကို အကြွေ ၄၀၀၀ ဖိုး ဘယ်ကသွားရှာမလဲ..
ဂျပန်မှာ ဘယ်လို အင်္ဂလန်မှာ ဘယ်လို စင်ကာပူမှာဆို ဘယ်လို အဲ့ဒီလိုပဲ အဲဒီက စည်းကမ်းတွေ လိုပဲ မြန်မာပြည်က ရုံးတွေမှာ စက်ရုံတွေမှာ ဈေးတွေမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အဝင် ဝ ကနေ ပြန်ထွက်တဲ့ထိ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတာပဲ… ဒီဥပဒေတွေကို ပြည်သူလိုက်နာအောင် အကောင်ထည် ဖော်မှုကသာ အားနည်းတာ.
လူတယောက် Q စဝင်တာကနေ + resultရ နောက်ဆုံး ဆေးရုံကနေ ဆင်းတဲ့ထိ ဆေးစစ်ခကနေ နေ/စားစရိတ် သိန်းချီကုန်တာ လူတိုင်းသိနေကြတာပဲ.. နေထိုင်ု ပုံစံအသစ်မှာ ကုန် ကျ မှု သိပ်ကိုနည်းတဲ့ social distancing နဲ့ mask တပ်တာကို တင်းကျပ် ကြပ်မတ် ထိန်းကျောင်းဖို့ (ဖမ်းဖို့) လူထပ်မတိုးပဲ ဆေးရုံတွေ ပဲ ထပ်တိုးနေရင် တကယ် လုပ်ရ တဲ့ သူတွေ စိတ်ကုန် လာကြလိမ့်မယ်..
ပြောချင်တာက.. လယ်ကွက်ထဲ ဆေးရုံထပ်ဆောက် တာထက် စည်းကမ်းတင်းကျပ်ဖို့ လူများများထပ်တိုးပေး /ဒဏ်ကြေးထပ်တိုးပေး new normal လူမှုပုံစံသစ်နဲ့ မသွားနိုင်ရင် တတို င်ြး ပ ည်လုံး နလန်မထူနိုင် အလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်ပဲ ငတ်တော့မှာ၊ ပြည်သူသိအောင် ပိုအသိပညာပေး..
ဆေးရုံတှေ ဘယျလောကျ ပဲ ထပျဆောကျဆောကျ အခွခေံအကဆြုံး mask တပျတာနဲ့ social distancing ကို လူမြားမြားထညျ့ပီး မတငျးကပျြ မကွပျမတျရငျ ဆရာဝနျတှေ vo lu nt eer တှပေါ လကျပနျးကြ စိတျကုနျလာတော့မယျ။
ခုထိေ မးစတှေ့ေ ခြိတျကောငျးတုနျး.. Shopping mall တှမှော အရငျလို အီလေး ဆှဲ ဈေးဝယျနတေုနျး..(မနကေ့ဆို ဩခမြိတယျ) ၂၀၀ ဒဏျရိုကျလို့ ၅၀၀၀ တနျ ပေးရငျ ဖ မျး တဲ့ သူ ၄၈၀၀ ပွနျအမျးဖို့ ခကျသှားပွီ….၁၀၀၀ တနျ ၅ ယောကျလောကျ ဆကျတိုကျ ပေးသှားရငျကို အကွှေ ၄၀၀၀ ဖိုး ဘယျကသှားရှာမလဲ..
ဂပြနျမှာ ဘယျလို အင်ျဂလနျမှာ ဘယျလို စငျကာပူမှာဆို ဘယျလို အဲ့ဒီလိုပဲ အဲဒီက စညျးကမျးတှေ လိုပဲ မွနျမာပွညျက ရုံးတှမှော စကျရုံတှမှော ဈေးတှမှော စားသော ကျဆို ငျတှေ မှာ အဝငျ ဝ ကနေ ပွနျထှကျတဲ့ထိ လိုကျနာရမယျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ထုတျပွနျထားတာရှိတာပဲ… ဒီဥပဒတှေကေို ပွညျသူလိုကျနာအောငျ အကောငျထညျ ဖျောမှု က သာ အားနညျးတာ.
လူတယောကျ Q စဝငျတာကနေ + resultရ နောကျဆုံး ဆေးရုံကနေ ဆငျးတဲ့ထိ ဆေးစဈခကနေ နေ/စားစရိတျ သိနျးခြီကုနျတာ လူတိုငျးသိနကွေတာပဲ.. နထေိုငျု ပုံစံအသဈမှာ ကုနျ ကြ မှု သိပျကိုနညျးတဲ့ social distancing နဲ့ mask တပျတာကို တငျးကပျြ ကွပျမတျ ထိနျးကြောငျးဖို့ (ဖမျးဖို့) လူထပျမတိုးပဲ ဆေးရုံတှေ ပဲ ထပျတိုးနရေငျ တကယျ လုပျရ တဲ့ သူတှေ စိတျကုနျ လာကွလိမျ့မယျ..
ပွောခငျြတာက.. လယျကှကျထဲ ဆေးရုံထပျဆောကျ တာထကျ စညျးကမျးတငျးကပျြဖို့ လူမြားမြားထပျတိုးပေး /ဒဏျကွေးထပျတိုးပေး new normal လူမှုပုံစံသဈနဲ့ မသှားနိုငျရငျ တတို ငျွး ပ ညျလုံး နလနျမထူနိုငျ အလုပျဆကျမလုပျနိုငျပဲ ငတျတော့မှာ၊ ပွညျသူသိအောငျ ပိုအသိပညာပေး..
Previous post ဘရာ မဝတ် ပဲ ပင်လယ်ကြီး နဲ့ အတူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ စစ်ပိုးအိမ်
Next post ပိဋိကတ် သုံးပုံစလုံး ကို အာဂုံဆောင်နိုင် သည့် ( ၁၅ ) ပါးမြောက် အရှင်သူမြတ် တစ်ပါးထပ်မံပေါ်ထွန်းလာ